Preexistence nke Kraịst - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Preexistence nke Kraist
Ịdị adị Amụma nke Kraịst
Jizọs bụ ebe etiti atụmatụ na nzube Chineke
Dị ka Jizọs, Nna ahụ zubere ka anyị nwee ebube tupu ụwa adị
Emere Jisos ka oburu onye nwe Kraist (obugh nke ahu ka ebido)
Jizọs bụ Onye mbụ na Onye Ikpeazụ nke atụmatụ Chineke maka nzọpụta
Ọ bụghị Jizọs bụ Okwu (Logos) nke ya na Chineke nọ na mbụ?
Gịnị banyere Ndị Kọlọsi 1:16 “Onye e buru ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke”?
Gịnị banyere Ndị Filipaị 2: 6-7?
Kedu maka amaokwu ndị ọzọ dị na Jọn?
Nrụrụ arụ nke akwụkwọ nsọ dị iche iche na -egosi ịdị adị
Gịnị banyere Jenesis 1:26? - 'Ka anyị mee mmadụ n'onyinyo anyị'
Otu amaokwu gbara ọkpụrụkpụ na -agaghị ewere ya n'ụzọ nkịtị
Map nke Akwụkwọ Nsọ pụtara
Kedu ihe ọjọọ dị na ikwere na Kraịst bụ anụ arụ?
Ọtụtụ Akwụkwọ Nsọ na -agba akaebe n'echiche nke Kraist bu ụzọ dịrị n'ụzọ amụma. Ndị ahụ kpara nkata megide onye nsọ Chineke bụ Jizọs, onye o tere mmanụ, mere ihe ọ bụla aka ya na atụmatụ ya buru ụzọ kpebie ime. (Ọrụ 4: 27-28) Iwu niile na Ndị Amụma na-agba akaebe maka ezi omume Chineke nke egosila ugbu a na-enweghị iwu-ezi omume Chineke site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst maka ndị niile kwere. (Ndị Rom 3: 21-22). Banyere nzọpụta a, ndị amụma ahụ buru amụma banyere amara a nyochara ma jụọ nke ọma, dịka mmụọ nke Kraịst n'ime ha buru amụma ahụhụ Kraịst na ebube ndị sochirinụ. (1 Pita 1: 10-11) Abraham rejoụrịrị ọ thatụ na ọ ga-ahụ ụbọchị Kraịst-ọ hụrụ ya wee nwee obi ụtọ. (Jọn 8:56). Mkpughe nke Kraịst dị tutu Abraham. (Jọn 8:58).
Luk 10:24 (ESV), Mndị amụma na ndị eze ọ bụla chọrọ ịhụ ihe ị na -ahụ
"N'ihi na m na -agwa gị nke ahụ ọtụtụ ndị amụma na ndị eze chọrọ ịhụ ihe ị na -ahụ, na ahụghị m ya, na ịnụrụ ihe ị nụrụ, ma anụghị m ya. ”
Ọrụ Ndịozi 2:23 (Jisus) dịka atụmatụ a kapịrị ọnụ na ama -ama siri dị Nke Chukwu
“Jizọs a, onye a raara nye dịka atụmatụ a kapịrị ọnụ na ama -ama siri dị nke Chineke, ị kpọgidere n'obe ma gbuo ya site n'aka ndị na -emebi iwu. "
Ọrụ 2: 30-32 (NIV) Yabụ na onye amụma -ọ hụrụ ma kwuo okwu banyere mbilite n'ọnwụ Kraịst
Ụmụnna m, apụrụ m iji obi ike gwa unu banyere nna ochie Devid na ọ nwụrụ ma lie ya, ili ya dịkwa n'ime anyị ruo taa. Yabụ na onye amuma, ebe ọ makwaara na Chineke hadụụrụ ya iyi na ọ ga -eme ka otu n'ime ụmụ ya nọkwasị n'ocheeze ya, ọ hụrụ ma kwuo okwu banyere mbilite n'ọnwụ Kraịst, na a hapụghị ya n'ime Hedis, anụ ahụ ya ahụghịkwa ire ure. Jizọs a ka Chineke kpọlitere n'ọnwụ, na anyị niile bụ ndị akaebe.
Ọrụ 3: 18-26 Chineke buru amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otú a mezuo
Ma gịnị Chineke buru amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otu a mezuo. Ya mere, chegharịanụ, chigharịa, ka e wee hichapụ mmehie unu, ka oge izu ike wee si n'ihu Onyenwe anyị bịa, ka o wee zite Kraịst ahụ a họpụtara nye unu, Jizọs, onye eluigwe ga -anata ruo oge iweghachi ihe niile dabere na ya Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. Ma ọ ga -abụ na mkpụrụ -obi ọbụla nke na -egeghị onye -amụma ahụ ntị, a ga -ebibi ya site na ndị mmadụ. ' Na ndị amụma niile kwuru, site na Samuel na ndị na -eso ya, kwukwara ụbọchị ndị a. Unu onwe-unu bu umu-ndikom ndi-amuma na nke ọb͕ub͕a-ndu ahu nke Chineke na nna-unu-hà b͕ara, si Abraham, N'ime nkpuru-gi ka agāgọzi ab͕uru nile nke uwa. Chineke, ebe O mere ka odibo Ya bilie, buru ụzọ zitere Ya Ya, iji gọzie unu site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime unu n'ajọ omume unu. ”
Ọrụ 4: 27-28 (NIV) Ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị kara aka ime
"N'ihi na n'ezie n'obodo a gbakọtara ọnụ megide ohu gị dị nsọ Jizọs, onye ị tere mmanụ, Herọd na Pọntiọs Paịlet, tinyere ndị mba ọzọ na ndị Izrel, ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị kpebirila ime.
Ọrụ 10: 42-43 (NIV) Nye ya ndi -amuma nile nāb witnessa àmà
“O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama na ọ bụ ya onye Chineke họpụtara ikpe onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ikpe. Nye ya ndi -amuma nile nāb witnessa àmà ka onye ọ bụla nke kwere na ya nweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
Ọrụ 26: 22-23 (NIV) N'ekwughị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ndị amụma na Mozis kwuru ga -emezu: na Kraịst aghaghị ịta ahụhụ na nke ahụ
“Enwetawo m enyemaka nke si n’aka Chineke, ya mere m’guzoro n’ebe a na-agba akaebe ma onye nta ma onye ukwu; na -ekwu ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ndị amụma na Mozis kwuru ga -emezu: na Kraịst aghaghị ịta ahụhụ na nke ahụ, ebe ọ bụ onye mbụ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ ga -ekwusara ma ndị anyị ma ndị mba ọzọ ìhè. ”
Ndị Rom 3: 21-22 Iwu na ndị amụma na -agbara ya akaebe
Ma ugbu a emela ka ezi omume Chineke pụta ìhè n'iwu, n'agbanyeghị Iwu na ndi -amuma nāb witnessa ya àmà, bú ezi omume Chineke site n'okwukwe ekwere na Jisus Kraist, nke diri ndi nile kwere.
(Gụọ 2 Timoti 1: 8-10.) Nzube na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite,
8 Ya mere, emela ihere ịgba ama banyere Onyenwe anyị, ma ọ bụ mụ onwe m bụ onye mkpọrọ ya, kama soro na -ata ahụhụ maka ozi ọma site n'ike Chineke, 9 Onye zọpụtara anyị wee kpọọ anyị oku dị nsọ, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị kama ọ bụ maka ebumnuche na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ niile amalite., 10 nke egosikwara ugbu a site na mpụta nke Onye Nzọpụta anyị Kraịst Jizọs, onye kagburu ọnwụ wee wetara ndụ na anwụghị anwụ ìhè site na ozioma.
(1 Pita 1: 10-11) Ndị amụma ndị buru amụma banyere amara nke ga -abụ nke gị nyochara nke ọma wee jụọ ajụjụ
“Banyere nzọpụta a, ndi -amuma ndi buru amuma bayere amara nke gaje ibu nke gi, nyochasiri nke ọma, na -ajụ onye ma ọ bụ oge mmụọ nke Kraịst nọ n'ime ha na -egosi mgbe ọ buru amụma ahụhụ nke Kraịst na ebube ndị sochirinụ. "
(Jọn 8: 54-58) Obi tọrọ nna unu Abraham ụtọ na ọ ga -ahụ ụbọchị m. Ọ hụrụ ya wee gladụrịa ọ .ụ
54 Jizọs zara, "Ọ bụrụ na m na -enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na -enye m otuto, onye unu na -asị, 'Ọ bụ Chineke anyị.' 55 Ma unu amabeghị ya. Ama m ya. Ọ bụrụ na m asị na amaghị m ya, aga m abụ onye ụgha dị ka gị, mana amaara m ya ma na -edebe okwu ya. 56 Obi tọrọ nna unu Abraham ụtọ na ọ ga -ahụ ụbọchị m. Ọ hụrụ ya wee gladụrịa ọ .ụ. " 57 Ya mere ndị Juu sịrị ya, “Ị kabeghị afọ iri ise, ị hụkwara Abraham?” 58 Jisus siri ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, Mb Abrahame akāmughi Abraham Mu onwem di. "
Jọn 8: 54-58 (Peshitta, Lamsa), Obi tọrọ nna -unu Abraham utọ nke -uku ihu ub dayọchim; ma ọ hụrụ ya wee n̄ụrịa ọn̄ụ
“Jizọs sịrị ha, Ọ bụrụ na m sọpụrụ onwe m, nsọpụrụ m abụghị ihe ọ bụla; kama ọ bụ Nna m na -asọpụrụ m, onye unu na -ekwu maka ya, Ọ bụ Chineke anyị. Ma unu amabeghị ya, mana amaara m ya; ọ bụrụkwa na m asị na amaghị m ya, aga m abụ onye ụgha dị ka unu onwe unu; mana amaara m ya ma ana m erube isi n'okwu ya. Obi tọrọ nna -unu Abraham utọ nke -uku ihu ub dayọchim; ma ọ hụrụ ya wee n̄ụrịa ọn̄ụ. Ndi -Ju siri Ya, I kāb oldaghi ọgu arọ abua na iri, ma i huru Abraham? Jisus siri ha, N'ezie, n'ezie, Asị m unu, tupu Abraham adị, adị m.
Jizọs bụ ebe etiti atụmatụ na ebumnobi Chineke hiwere site na mgbe ochie dịka Mozis kwuru, “Onyenwe anyị Chineke gị ga -esi n'etiti gị kpọlitere gị onye amụma dịka m. (Deut 18: 15-19) Jizọs bụ Kraịst ahụ e buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile (Ọrụ 3: 18-26). N'ime oge zuru oke, Ezi zitere Ọkpara ya, onye nwanyị mụrụ, amụrụ n'okpuru iwu. (Ndị Galeshia 4: 4-5). Chineke buru ụzọ mara anyị ma burukwa ụzọ kpebie na anyị ga-eme ka oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara karịa ọtụtụ ụmụnne (Ndị Rom 8: 28-29). Ihe omimi nke uche Chineke bụ ebumnuche, nke o setịpụrụ n'ime Kraịst dịka atụmatụ maka oge zuru oke, iji mee ka ihe niile dịrị n'otu n'ime ya. (Ndị Efesọs 1: 9-10) N'ime ya ka anyị nwetara ihe nketa, ebe eburula ụzọ kpebie ya dịka ebumnuche nke onye na-eme ihe niile si dị na ndụmọdụ nke uche ya. (Ndị Efesọs 1:11) Ebuputala atụmatụ nke ihe omimi zoro ezo kemgbe ọtụtụ afọ na Ezi, onye kere ihe niile, apụtala. (Ndị Efesọs 3: 9-10) Nke a bụ dịka ebumnuche ebighi ebi nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. ” (Ndị Efesọs 3:11) Chineke ekebeghị anyị maka iwe, kama ka anyị nweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. (1 Ndị Tesalonaịka 5: 9) Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana e mere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ maka anyị. (1 Pita 1:20) Nye ndị akpọrọ, Kraịst bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chineke (1 Cor 1: 24) ịgba ama nke Jizọs bụ mmụọ nke ibu amụma. (Mkpu. 19:10) Aha a na -akpọ ya bụ Okwu Chineke. (Mkpughe 19:13) Ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya (Hib 2: 5)
(Deuterọnọmi 18:15, 18-19) Jehova bụ́ Chineke gị ga -esi n’etiti gị họpụtara gị onye amụma nke dị ka m
"Jehova bụ́ Chineke gị ga -esi n’etiti gị, n’etiti ụmụnne gị, kpọlitere gị onye amụma nke dị ka m, ọ bụ ya ka ị ga -ege ntị.... M ga -esi n'etiti ụmụnne ha họpụtara ha onye amụma dị ka gị. M'g puttiye kwa okwum nile n'ọnu -ya, ọ gāgwa kwa ha okwu nile nke M'g commandnye ya n'iwu. Ma onye ọ bụla nke na -agaghị anụ okwu m nke ọ ga -ekwu n'aha m, mụ onwe m ga -ajụ ya
Maịka 5: 2, Site na gị ka ị ga -esi pụta nye m onye ga -abụ onye ọchịchị n'Izrel, nke ọbịbịa ya sitere na mgbe ochie
Ma gị onwe gị, Betlehem Efrata, onye dị ntakịrị nke ukwuu ịnọ n'etiti ebo Juda, site na gị ka ị ga -apụta nye m onye ga -abụ onye ọchịchị n'Izrel, onye ọbịbịa ya sitere na mgbe ochie, site na mgbe ochie.
Ọrụ 3: 18-26 (NIV) Ndi amuma nile nke kwuworo - kwuputakwara ubochi ndia
18 Ma ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraist ya ga-ata ahụhụ, o mezuru. 19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 oge nke ume ume nwere ike si n'iru Onyenwe anyị, nakwa na o nwere ike izipu Kraist ahọpụta maka gị, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses wee sị, 'Onye -nwe -ayi Chineke g willme ka nwa -nne -unu biliere unu onye -amuma dika mu. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 Na ndị amụma niile kwuru, site na Samuel na ndị na -eso ya, kwukwara ụbọchị ndị a. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ nile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya ka ọ gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
(Ndị Galetia 4: 4-5) mgbe oge zuru ezu abịawo, Chineke zitere Ọkpara ya
“Ma mgbe oge zuru ezu abịawo, Chineke zitere Ọkpara ya, keomumu nke nwanyi, keomumu n'okpuru iwu, iji gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nata nkuchi dị ka ụmụ. "
Ndị Rom 8: 28-29 E buru ụzọ kaa ya ka ọ dabaa na oyiyi nke ya ya
“Anyị makwa na maka ndị hụrụ Chineke n'anya ihe niile na -arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya. Maka ndị ọ buru ụzọ mara, o burula ụzọ kpebie ka ha mee ka oyiyi ya ya, ka o wee dịrị ọkpara n'etiti ọtụtụ nwannes.
(Ndị Efesọs 1: 3-5) He họpụtara anyị n'ime ya tupu ntọala ụwa
“Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye jiri ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst, dịka he họpụtara anyị n'ime ya tupu ntọala ụwa, ka anyị wee dị nsọ na -enweghị ụta n'ihu ya. N'ịhụnanya ọ kara aka ka anyị were dị ka ụmụ site n'aka Jizọs Kraịst, dika nzube nke uche ya si di. "
Ndị Efesọs 1: 9-11 (ESV), Adị ka nzube ya si dị, nke o wepụtara n'ime Kraịst dị ka atụmatụ maka oge zuru oke
9 na -eme ka anyị mara ihe omimi nke uche ya, dika ebumnuche ya si di, nke o wepụtara n'ime Kraịst 10 dị ka atụmatụ maka oge zuru oke, ijikọ ihe niile n'ime ya, ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa.11 N'ime ya ka anyị nwetara ihe nketa, ebe eburu ụzọ kpebie dịka onye ahụ na -eme ihe niile si dị dịka ọchịchọ nke ọchịchọ ya si dị.
(Ndị Efesọs 3: 9-11) Atụmatụ - na amamihe dị iche iche nke Chineke - nzube ebighi ebi nke o mezuru n’ime Kraịst Jizọs
"Iji kpughere onye ọ bụla ihe bụ atụmatụ nke ihe omimi zoro ezo ruo ọtụtụ afọ n'ime Chineke, Onye kere ihe niile, nke mere na site na ụka amamihe dị iche iche nke Chineke enwere ike ime ka ndị na -achị achị na ndị isi nọ n'eluigwe mara ugbu a. Nke a bụ dika nzube ebighi -ebi si dị, nke o mezuru na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. "
1 Ndị Tesalonaịka 5: 9-10 Chineke ekeghị anyị maka iwe, kama ka anyị nweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Christ
“N'ihi Chineke ekeghị anyị maka iwe, kama ka anyị nweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Christ, onye nwụrụ maka anyị ka anyị nwere ike ịnọnyere ya ma anyị na -amụ anya ma anyị na -arahụ ụra. ”
1 Ndị Kọrịnt 1: 18-25 (ESV), Okwu nke obe- nye anyị bụ ndị a na-azọpụta, ọ bụ ike nke Chineke- anyị na-ekwusa Kraịst akpọgidere n'obe
18 n'ihi na okwu obe bụ nzuzu nye ndị na -ala n'iyi, ma nye anyị bụ ndị a na -azọpụta, ọ bụ ike nke Chineke. 19 N'ihi na e dere, "M ga -emebi amamihe ndị maara ihe, nghọta nke ndị nghọta ka m ga -akụkwa." 20 Ebee ka onye maara ihe nọ? Ebee ka odeakwụkwọ nọ? Ebee ka onye na -arụrịta ụka nke afọ a dị? Ọ bụ na Chineke emeghị amamihe nke ụwa nzuzu? 21 N'ihi na, n'amamihe Chineke, ụwa ejighị amamihe mara Chineke, ọ masịrị Chineke site na nzuzu nke ihe anyị na -ekwusa ịzọpụta ndị kwere. 22 N'ihi na ndị Juu na -achọ ihe ịrịba ama na ndị Grik na -achọ amamihe, 23 ma anyị na -ekwusa Kraịst akpọgidere n'obe, ihe ịsụ ngọngọ nye ndị Juu na nzuzu nye ndị mba ọzọ, 24 ma nye ndị a kpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraist ike nke Chineke na amamihe nke Chineke. 25 N'ihi na nzuzu nke Chineke mara ihe karịa mmadụ, adịghị ike nke Chineke dịkwa ike karịa mmadụ.
(Gụọ 2 Timoti 1: 8-10.) Nzube na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite
8 Ya mere, emela ihere ịgba akaebe banyere Onyenwe anyị, ma ọ bụ mụ onwe m bụ onye mkpọrọ ya, kama soro na -ata ahụhụ n'ihi ozi ọma site n'ike Chineke, 9 Onye zọpụtara anyị wee kpọọ anyị oku dị nsọ, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị kama ọ bụ maka ebumnuche na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ niile amalite., 10 nke egosikwara ugbu a site na mpụta nke Onye Nzọpụta anyị Kraịst Jizọs, onye kagburu ọnwụ wee wetara ndụ na anwụghị anwụ ìhè site na ozioma.
1 Pita 1:20 (NIV) Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ
Mkpughe 19:10, 13 (ESV), Tàmà nke Jizọs bụ mmụọ nke ibu amụma - a na -akpọ ya Okwu Chineke
“Kpọọ isiala nye Chineke. Maka àmà nke Jizọs bụ mmụọ nke ibu amụma… Ọ yi uwe mwụda mikpuo n'ọbara, na aha a na -akpọ ya bụ Okwu Chineke. "
(Ndị Hibru 2: 5-6) Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya
N'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka ọ bụ Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya. A na -agba ama ya n'otu ebe, "Gịnị bụ mmadụ, na ị na -echeta ya, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, na ị na -elekọta ya?
Ahụhụ nke oge a ekwesighi ka atụnyere ebube nke ahụ ka a ga -ekpughere anyị. (Ndị Rom 8:18) Ihe e kere eke nọ n'okpuru ihe efu na -enwe olileanya na ihe okike n'onwe ya ga -enwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure wee nweta nnwere onwe nke ebube ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8: 20-21) Anyị bụ ndị nwere mkpụrụ mbụ nke Mmụọ, na-asụ ude n'ime anyị ka anyị na-echesi ike maka nkuchi dị ka ụmụ. (Ndị Rom 8:23) Maka ndị hụrụ Chineke n'anya, ihe niile na -arụkọ ọrụ maka chi maka ndị akpọrọ dịka nzube ya si dị. (Ndị Rom 8:28) Ndị ọ buru ụzọ mata ma burukwa ụzọ kpebie ka ha kwekọọ n'oyiyi nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ ọkpara n'etiti ọtụtụ ụmụnne. (Ndị Rom 8:29) Ụgbọ mmiri ebere, Chineke kwadebere tupu oge eruo maka otuto - ọbụna jiri onye ọ kpọrọ ka a kpọọ anyị 'ụmụ nke Chineke dị ndụ'. (Ndị Rom 9: 22-26) Nke a bụ amamihe Chineke nke zoro ezo na nke zoro ezo, nke Chineke kpebiri tupu afọ maka ebube anyị. (1 Kọr 2: 6-7) Ọ dịghị anya hụchara, ntị anụbeghị, ma ọ bụ obi echeghị, ihe Chineke kwadebere maka ndị hụrụ ya n'anya. ” (1 Kọr 2: 9) Ụlọ anyị nwere bụ ebighi ebi n'eluigwe nke ejiri aka mee, ọ bụghị ụlọ nke si n'aka Chineke. (2 Cor 5: 1) Onye kwadebere anyị ebe obibi na omume rụrụ arụ nke eluigwe bụ Chineke (2 Cor 5: 2-5)
Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, gọziela anyị n'ime Kraịst wee họrọ anyị n'ime ya tupu ntọala ụwa. (Ndị Efesọs 1: 3-4). N'ịhụnanya o buru ụzọ kpebie anyị maka ido onwe ya dị ka ụmụ site na Jizọs Kraịst, dị ka ebumnuche ya si dị. (Ndị Efesọs 3: 5) Dị ka amara ya si dị, emeela ka anyị mara ihe omimi nke uche ya, dị ka ebumnuche ya si dị, nke o setịpụrụ n'ime Kraịst dị ka atụmatụ maka oge zuru oke, ijikọ ihe niile n'ime ya. (Ndị Efesọs 1: 7-10) N'ime ya ka anyị na-enweta ihe nketa, ebe eburula ụzọ kpebie dị ka nzube nke onye na-eme ihe niile si dị. (Ndị Efesọs 1:11). Anyị bụ aka ọrụ ya, ekepụtara anyị n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere na mbụ, ka anyị wee na -eje ije na ya. (Ndị Efesọs 2:10) Chineke onye zọpụtara anyị kpọrọ anyị oku nsọ n'ihi nzube na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ amalite. (2 Tim 1: 8-9)
Ikike ịnọdụ n'aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke Kraịst abụghị nke ya inye, kama ọ bụ onye Nna doziri ya. (Mat 20:23) Mgbe Nwa nke mmadụ ga -abịa n'ebube ya, eze ga -asị ndị nọ n'aka nri ya, 'Bịanụ, ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze a kwadebeere unu site na ntọala nke ụwa' . (Matiu 25: 31-34) Jizọs sịrị Nna ya, “Enyere m gị otuto n'ụwa, ebe m rụchara ọrụ ị nyere m ka m rụọ. Ugbu a, Nna, were ebube nke mụ na gị nweburu tupu ụwa adị m mee m amara n'ihu gị. ” (Jọn 17: 4-5) Mgbe ahụ Jisọs gara n'ihu na-ekpe ekpere n'aha ndị ga-ekwere na ya na-asị “Ebube nke I nyewo m ka m nyeworo ha, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, mụ onwe m n'ime ha, gị onwe gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke, ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m ma hụkwa ha n'anya dịka ị siri hụ m n'anya. ” (Jọn 17: 20-23) Jizọs wee kpee ekpere, sị, Nna, ọ dị m ka ndị ahụ i nyere m, ka mụ na ha nọrọ ebe m nọ, ka ha wee hụ ebube m nke i nyere m n'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu oge ahụ. ntọala nke ụwa. ” (Jọn 17:24). Dika a gọziri Kraist ma hụ ya n'anya tupu a tọọ ntọala ụwa, otu ahụ kwa ka e mere anyị. (Ndị Efesọs 1: 3-4).
Ndị Rom 8: 18-23 na ebube nke aga ekpughere ayi -mkpughe nke ụmụ Chineke
N'ihi na echere m na ahụhụ nke oge ugbu a ekwesighi ka atụnyere na ebube nke a ga -ekpughe nye anyị. N'ihi na ihe okike na -echesi ike maka mkpughe nke ụmụ Chineke. N'ihi na edobere ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị site n'ọchịchọ ya, kama n'ihi onye doro ya. n'olileanya na ihe okike n'onwe ya ga -enwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure wee nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. N'ihi na anyị maara na ihe niile e kere eke na -asụkọ ude na mgbu nke ịmụ nwa ruo ugbu a. Ọ bụghịkwa naanị ihe e kere eke, kama anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike. doo ka umu nwoke, mgbapụta nke ahụ anyị.
Ndị Rom 8: 28-29 Nzube ya - enye ama ebebiere akan̄a ka o yie oyiyi Ọkpara ya
“Anyị makwa na maka ndị hụrụ Chineke n'anya ihe niile na -arụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma, maka ndị akpọrọ dịka nzube ya. Maka ndị ọ buru ụzọ mata na o burukwa ụzọ kpebie ka o yie oyiyi Ọkpara ya, ka o wee dị ka ọ dị ọkpara n'etiti ọtụtụ nwannes.
Ndị Rom 9: 22-26 Akụ nke ebube ya maka arịa ebere, nke ọ kwadebere na mbụ maka otuto
Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ igosi iwe ya na ime ka a mara ike ya, were ntachi obi dị ukwuu tachie arịa iwe nke a kwadebere maka mbibi, iji mee ka a mara akụ nke ebube ya maka arịa ebere, nke he kwadowo tupu oge eruo maka otuto- ọbụna anyị ndị ọ kpọrọ, ọ bụghị site na ndị Juu naanị kamakwa site na ndị mba ọzọ? Dị ka ọ na -ekwu n'ezie na Hosea, “Ndị na -abụghị ndị m ka m ga -akpọ 'ndị m'; na nwanyị ahụ a na -ahụghị n'anya ka m ga -akpọ 'onye m hụrụ n'anya.' Na kpọmkwem ebe a sịrị ha, 'Unu abụghị ndị m,' n'ebe ahụ a ga -akpọ ha 'ụmụ nke Chineke dị ndụ.'"
1 Ndị Kọrịnt 2: 6-9. Anyị na -enye amamihe Chineke nke zoro ezo na nke zoro ezo, nke Chineke nyere iwu tupu afọ niile maka ebube anyị
Ma n'etiti ndị tozuru oke anyị na -enye amamihe, n'agbanyeghị na ọ bụghị amamihe nke oge a ma ọ bụ nke ndị ọchịchị nke oge a, ndị ga -anwụ. Mana anyị na -enye amamihe Chineke nke zoro ezo na nke zoro ezo, nke Chineke nyere iwu tupu afọ niile maka ebube anyị. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọchịchị nke oge a ghọtara nke a, n'ihi na ọ bụrụ na ha ghọtara ya, ha agaraghị akpọgide Onyenwe ebube. Ma, dị ka e dere, "Ihe anya adịghị ahụ, nke ntị na -anụbeghị, ma ọ bụ obi mmadụ chere, ihe Chineke kwadebere maka ndị hụrụ ya n'anya"
2 Ndị Kọrịnt 5: 1-5 (NIV), na anyị ga-eyikwasịkwa uwe ọzọ-Onye kwadebere anyị maka ihe a bụ Chineke.
N'ihi na anyị maara na ọ bụrụ na ebibie ụlọikwuu nke bụ ụwa anyị, anyị nwere ụlọ site na Chineke, ụlọ e ji aka rụọ, ebighi ebi n'eluigwe. N'ihi na n'ụlọikwuu a, anyị na -asụ ude, na -atụsi anya ike iyikwasị ebe obibi anyị nke eluigwe, ma ọ bụrụ n'ezie na site n'iyiri ya, a gaghị ahụ anyị ka anyị gba ọtọ. N'ihi na mgbe anyị ka nọ n'ụlọikwuu a, anyị na -asụ ude, na -anyịgbu anyị, ọ bụghị na a ga -eyipụ anyị uwe, kama na a ga -eyikwasị anyị uwe ọzọ, ka ndụ wee loda ihe na -anwụ anwụ. Onye kwadebere anyị maka ihe a bụ Chineke, Onye nyere anyị Mmụọ nsọ.
Ndị Efesọs 1: 3-11 (NIV), Chineke-onye họpụtara anyị n'ime Kraịst tupu a tọọ ntọala ụwa
3 Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye jiri ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ime Kraịst n'ime eluigwe, 4 ọbụna dị ka ọ họọrọ anyị n'ime ya tupu a tọọ ntọala ụwa, ka anyị wee dị nsọ na -enweghị ụta n'ihu ya. N'ịhụnanya 5 o burula ụzọ kaa anyị ka anyị bụrụ nwa ya site n'aka Jizọs Kraịst, dika nzube nke uche ya si di, 6 ka e wee too amara ya dị ebube, nke o ji gọzie anyị n'ime Onye m hụrụ n'anya. 7 N'ime ya ka anyị nwere mgbapụta site n'ọbara ya, mgbaghara nke njehie anyị, dịka ịba ụba nke amara ya si dị. 8 nke o nyere anyị n'amamihe na nghọta niile 9 na -eme ka anyị mara ihe omimi nke uche ya, dika ebumnuche ya si di, nke o setịpụrụ n'ime Kraịst 10 dị ka atụmatụ maka oge zuru oke, iji mee ka ihe niile dịrị n'otu, ihe ndị dị n'eluigwe na ihe ndị dị n'ụwa. 11 N'ime ya ayi enwetawo ihe -nketa, ebe e buru ụzọ kaa akara dịka ebumnuche nke onye ahụ na -eme ihe nile dịka ndụmọdụ nke ọchịchọ ya siri dị
Ndị Efesọs 2:10 (ESV), e kere anyị n'ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ - nke Chineke kwadebere na mbụ
"N'ihi na anyị bụ aka ọrụ ya, ekere nime Kraist Jisus maka ezi ọlụ, nke Chineke doziri na mbu, ka anyị na -eje ije n'ime ha. ”
2 Timoti 1: 8-10 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ)
Taịtọs 1: 2-3 (NIV), I.n olileanya nke ndụ ebighi ebi, nke Chineke kwere na nkwa tupu ụwa amalite
2 n'olileanya nke ndụ ebighi ebi, nke Chineke, onye na -adịghị agha ụgha, kwere nkwa ya tupu oge amalite 3 na egosipụtara n'oge ya n'okwu ya site na nkwusa nke e nyefere m n'iwu nke Chineke Onye Nzọpụta anyị;
Matiu 20:23 (ESV), ịnọdụ ala n'aka nri m na n'aka ekpe m bụ maka ndị Nna m kwadebere maka ya.
Ọ sịrị ha, “Unu ga -a cupụ iko m, kama ịnọdụ ala n'aka nri m na n'aka ekpe m abụghị nke m inye, mana ọ bụ maka ndị ọ bụụrụ maka ya nke Nna m kwadebere. "
Matiu 25: 31-34, Bnke Nna m mebere, ketanụ alaeze akwadoro gị site na ntọala nke ụwa
“Mgbe Nwa nke mmadụ ga -abịa n'ebube ya, na ndị mmụọ ozi niile ya na ha nọ, mgbe ahụ ọ ga -anọkwasị n'ocheeze ya dị ebube. A ga -achịkọta mba niile n'ihu ya, ọ ga -ekewakwa ndị mmadụ na ibe ha dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ na ewu. Ọ ga -edebe atụrụ n’aka nri ya, ma debe ewu n’aka ekpe ya. Mgbe ahụ, Eze ahụ ga -asị ndị nọ n'aka nri ya, 'Bịa, ndị Nna m gọziri agọzi, ketanụ alaeze akwadoro gị site na ntọala nke ụwa.
(Jọn 17: 1-5) Were otuto nke mụ na gị nwere tupu ụwa amalite ịdị mee m otuto n'ihu gị
Mgbe Jizọs kwuchara okwu ndị a, o welie anya ya lee eluigwe, sị, “Nna, oge awa ahụ eruola; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, ebe i nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, ka ọ nye ndị niile i nyere ya ndụ ebighi ebi. Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist. Ana m enye gị otuto n'ụwa, ebe m rụchara ọrụ ahụ i nyere m ka m rụọ. Ugbu a, Nna, mee ka m dị ebube n'ihu gị jiri ebube nke m nwere n'ebe ị nọ tupu ụwa adị.
(Jọn 17: 20-26) Enyewo m ha otuto ahụ i nyere m, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị nọ n'elu
“Achọghị m maka ihe ndị a naanị, kamakwa maka ndị ga -ekwere na m site n'okwu ha, ka ha nile we buru otù, dika Gi onwe -gi di nimem, na Mu onwem di kwa nime gi, ka ha onwe ha kwa wee dịrị n'ime anyị, ka ụwa wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Enyewo m ha otuto ahụ i nyere m, ka ha wee bụrụ otu dị ka anyị bụ otu, mụ n'ime ha na gị n'ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke., ka ụwa wee mara na ọ bụ gị zitere m, hụkwa ha n'anya dị nnọọ ka ị hụrụ m n'anya. Nna, anamachọ ka, ndi I nyeworom, ka Mu na ha nọ kwa; ịhụ ebube m nke I nyewo m n'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu a tọọ ntọala ụwa. Nna nke bụ onye ezi omume, n'agbanyeghị na ụwa amaghị gị, ama m gị, ndị a makwaara na ọ bụ gị zitere m. Emere m ka ha mara aha gị, m ga -emekwa ka a mara ya, ka ihu -n'anya I ji hum we di nime ha, na mụ onwe m nọ n'ime ha. ”
(Aịsaịa 42:1, NIV) Lee ohu m, onye m na -akwado, onye m họọrọ, Onye mkpụrụ obi m na -atọ ụtọ
Lee ohu m, onye m na -akwado, onye m họọrọ, onye mkpụrụ obi m na -atọ ụtọ; Enwere m tukwasi Mọm n'aru Ya; ọ ga -ewepụtara mba niile ikpe ziri ezi.
Luk 1: 30-33 (Ọ ga-adị ukwuu), Onye-nwe Chineke ga-enye ya ocheeze nna ya Devid.
Mọ -ozi ahu we si ya, Atula egwu, Meri, n'ihi na Chineke mere gi amara. Ma, le, ị ga -atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, ị ga -akpọkwa aha ya Jizọs. Ọ ga -adị ukwuu, a ga -akpọkwa ya Ọkpara nke Onye Kasị Elu. Jehova, bú Chineke, g willnye kwa ya oche -eze Devid nna -ya, ọ ga -achịkwa ụlọ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi, alaeze ya enweghịkwa ọgwụgwụ. ”
Luk 9:35, Onye a bụ Ọkpara m. Onye M Họpụtara
Na otu olu si n'ígwé ojii ahụ pụta, sị,Onye a bụ Ọkpara m, Onye M họpụtara; gee ya ntị!
Ọrụ Ndịozi 2:36 (NIV) Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe
Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
Ọrụ 3:13 (ESV), TYa onwe -ya, Chineke nke nna -ayi -hà, nyere Ohu -Ya Jisus otuto
Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob, na Chineke nke nna nna anyi, toro ohu ya Jisos otutoOnye unu nyefere n'aka Paịlet, mgbe o kpebiri ịtọhapụ ya.
Ọrụ 5: 30-31 (NIV) Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka Onye ndu na onye nzọpụta
Chineke nke nna-ayi-hà mere ka Jisus bilie, Onye I b͕uru site n'osisi Ya n'elu osisi. Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka Onye ndu na onye nzọpụta, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie.
Ọrụ 10: 42-43 (NIV) Ọ bụ onye Chineke họpụtara ikpe onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ikpe
“O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba akaebe nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ikpe onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ikpe. Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
Ọrụ 17: 30-31 (NIV) ewepụtala ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara
Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa, n'ihi na O wepụtala otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
(Ndị Filipaị 2: 8-11) Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nye ya aha nke karịrị aha niile
Ebe achọputara ya na udi nke madu, o wedara onwe ya ala site na nrube isi rue onwu, obuna onwu n’elu obe. Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, ka ọ were n'aha Jizọs ka ikpere niile gbuo ikpere n'ala, n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ụwa, ire niile na -ekwupụtakwa na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.
(Gụọ 1 Timoti 2: 5-6.) E nwere otu Chineke, na otu onye ogbugbo dị n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
n'ihi na otu Chineke dị, na otu onye ogbugbo dị n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a na -enye n'oge ya.
(Ndị Hibru 5: 1-5) Kraịst ebulighị onwe ya elu ịbụ nnukwu onye nchụàjà, kama a họpụtara ya
Maka onye isi nchụàjà ọ bụla onye ahọpụtara n'etiti mmadụ ka a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. O nwere ike jiri nwayọọ na -emeso ndị na -amaghị ihe na ndị na -enupụ isi ihe, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enwe adịghị ike. 3 N'ihi nke a, iwu ji ya ịchụ aja maka mmehie nke ya dịka ọ na -achụ maka ndị mmadụ. Ọ dịghịkwa onye na -ewere nsọpụrụ a nye onwe ya, kama ọ bụ naanị mgbe Chineke kpọrọ ya, dịka akpọrọ Erọn. Otu a kwa Kraịst ebulighị onwe ya elu ka ọ bụrụ nnukwu onye nchụàjà, kama ọ bụ onye họpụtara ya sị ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla gị”
Ndị Hibru 9:24 (ESV), Caka ahu abanyela n'ime eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị
n'ihi na Kraịst abanyela, ọ bụghị n'ebe nsọ ndị e ji aka mee, bụ́ ihe atụ nke ihe bụ eziokwu, kama n'ime eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị.
Jọn 3:35, Nna hụrụ Ọkpara na hdika enyere ihe nile n'aka -ya
Nna hụrụ Ọkpara na hdika enyere ihe nile n'aka -ya.
Jọn 17:2, Nna nyere ya ikike n'elu anụ ahụ niile
Nna nyere ya ikike n'elu anụ ahụ niile, inye ndị niile o nyere ya ndụ ebighi ebi.
Jọn 17:3, Ndụ ebighi ebi, ka ha mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, na Jizọs Kraịst onye i zitere
Ma nke a bụ ndụ ebighi ebi, ka ha wee mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, na Jizọs Kraịst onye i zitere.
Jizọs bụ onye mbụ nke mbilite n'ọnwụ na ndị niile a zọpụtara site na mmalite ruo ọgwụgwụ ka a zọpụtara site na Kraịst. Jizọs bụ onye mbụ na onye ikpeazụ nke ihe okike ọhụrụ (ọ bụghị ihe okike mbụ). Onye eburu ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke metụtara ihe e kere ọhụrụ (ọkpara site na ndị nwụrụ anwụ)
Ọrụ 4: 11-12 (NIV) Nzọpụta adịghị n'onye ọ bụla ọzọ
Jizọs a bụ nkume nke unu, ndị na -ewu ụlọ, jụrụ aghọọla isi nkuku. Nzọpụta adịghịkwa n'onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ dighi aha ọzọ di n'okpuru elu -igwe nke enyere n'etiti madu nke aghaghi izọputa ayi. "
Ndị Rom 5: 18-19 Site na nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume
Ya mere, dịka otu njehie butere ikpe maka mmadụ niile, otu a otu omume nke ezi omume na -eduba mmadụ niile n'onye ezi omume na ndụ. N'ihi na dị ka nnupụisi nke otu onye ahụ mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie site nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume.
Ndị Rom 8:29 (NIV) Ka o wee bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnne
Those onye ọ buru ụzọ mata ya kara akara aka ka -eme ka oyiyi Ọkpara ya, ka o wee bụrụ onye e buru ụzọ mụọ n'etiti ọtụtụ ụmụnne.
1 Ndị Kọrịnt 8: 4-6 (ESV) otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, site n'aka ya ka ihe nile si dị, sitekwa n'aka ya ka anyị dị
"Ọ dịghị Chineke ọ bụla ma ọ bụghị otu." N'ihi na agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"-mana maka anyị otu Chineke dị, bụ Nna, site n'aka onye ka ihe nile na nke anyị dịịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, site n'aka ya ka ihe nile si dị, sitekwa n'aka ya ka anyị dị.
1 Ndị Kọrịnt 15: 20-22. N'ihi na dị ka ọnwụ si n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye
A kpọlitewo Kraịst n'ọnwụ, mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. N'ihi na dị ka ọnwụ si n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye. N'ihi na dịka mmadụ niile na -anwụ n'ime Adam, otu a ka ọ dịkwa nime Kraist ka aga eme ka madu nile di ndu.
2 Ndị Kọrịnt 5: 17-18. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Kraịst, ọ bụ onye e kere ọhụrụ
Ya mere, ọ buru na onye ọ bula di nime Kraist, ọ bu onye ekère ọhu. Ochie agabigawo; le, ihe ọhụrụ abiala. Ihe a niile sitere na Chineke, onye sitere na Kraịst me ka ayi na ya di n'udo ma nye anyị ozi nke ime ka a dị ná mma.
Ndị Efesọs 1: 9-10 (HV), Hbụ nzube - nke o setịpụrụ n'ime Kraịst -dịdị atụmatụ ijikọ ihe niile n'ime ya
9 na -eme ka anyị mara ihe omimi nke uche ya, dị ka nzube ya, nke ọ pụtara n'ime Kraịst 10 dị ka atụmatụ maka oge zuru oke, ijikọ ihe niile n'ime ya, ihe dị n'eluigwe na ihe dị n'ụwa.
Ndị Efesọs 3: 7-11 (ESV), Tọ na -eme atụmatụ - amamihe dị iche iche nke Chineke- na ebighi -ebi nzube nke o mezuru na Kraịst Jizọs
Of ozioma a E mere m onye ozi dịka onyinye amara nke Chineke si dị, nke enyere m site n'ike nke ike ya. Nye m, ọ bụ ezie na m bụ onye dịkarịsịrị nta n'ime ndị nsọ niile, enyere amara a, ikwusara ndị mba ọzọ akụ na -enweghị atụ nke Kraịst, na ikpughere onye ọ bụla. kedu atụmatụ nke ihe omimi zoro ezo maka afọ niile n'ime Chineke, Onye kere ihe niile, ka e wee site ugbu a mee ka amara amamihe dị iche iche nke Chineke site na ụka ọnọ mme andikara ye mme andikara ke mme heaven. Nke a bụ dịka akwụkwọ akụkọ si kwuo nzube ebighi ebi nke o mezuru n’ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị,
Ndị Kọlọsi 1: 12-20 Ọ bụ ya bụ mmalite, onye e bu ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ, na ihe niile ọ bụ nwere ike ịbụ nke kachasi
Na -ekele Nna, onye mere ka ị ruo oke ịkekọrịta ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè. Ọ napụtala anyị n'ọchịchịrị wee bufee anyị n'ala -eze nke Ọkpara -ya Ọ huru n'anya, onye ayi nwere nb redeaputa nime ya, mgbaghara mmehie. Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na -apụghị ịhụ anya, onye e buru ụzọ mụọ nke ihe nile e kere eke. N'ihi na site n'aka ya ka e kere ihe niile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na -ahụ anya na ihe a na -adịghị ahụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ikike - e sitere n'aka ya kee ihe niile. Ya onwe -ya bu kwa ihe nile uzọ, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile n togetherguzokọ n'otù. Ọ bụkwa ya bụ isi nke ahụ ahụ, bụ ụka. Ọ bụ ya bụ mmalite, onye e bu ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ, na ihe niile ọ bụ nwere ike ịbụ nke kachasi. N'ihi na nime Ya ka izu -oke nile nke Chineke tọrọ ụtọ ibi, na site n'aka ya ka ya na ihe niile dịghachi ná mma, ma ọ bụ n'ụwa ma ọ bụ n'eluigwe, na -eme udo site n'ọbara nke obe ya.
(Ndị Hibru 1: 1-5) Ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị ukwuu n'elu - ebe ọ dị elu karịa ndị mmụọ ozi
Ogologo oge gara aga, n'ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ụzọ, Chineke gwara ndị nna nna anyị okwu site n'ọnụ ndị amụma, mana n'ime ụbọchị ikpeazụ ndị a, o jirila Ọkpara ya gwa anyị okwu, onye ọ họtara onye -nketa nke ihe niile, Onye ọ bụkwa site n'aka ya ka O kere ụwa. Ọ bụ nchapụta nke ebube Chineke na akara zuru oke nke okike ya, na -ejikwa okwu ike ya na -akwado eluigwe na ụwa. Mgbe o mechara nsachapụ maka mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri nke ịdị ukwuu ahụ, ebe ọ dị elu karịa ndị mmụọ ozi dịka aha o ketara dị mma karịa nke ha.. N'ihi na ònye n'ime ndị mmụọ ozi ka Chineke kwuru sị, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla gị”? Ma ọ bụ ọzọ, “M ga- nye ya nna, na ọ ga ghoro m nwa nwoke ”? Ọzọkwa, mgbe ọ ga -eweta ọkpara n'ime ụwa, ọ sịrị, "Ka ndị mmụọ ozi Chineke niile kpọọ isiala nye ya."
Ndị Hibru 2: 5-13 (NIV), I.Ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya
n'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya. A na -agba ama ya n'otu ebe, "Gịnị bụ mmadụ, na ị na -echeta ya, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, na ị na -elekọta ya? I mere ya ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi; i werewo ebube na nsọpụrụ kpube ya okpu eze, na -edobe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. ” Ugbu a, ido onwe ya n'okpuru ihe niile n'okpuru ya, ọ hapụghị ihe ọ bụla n'okpuru ya. Ka ọ dị ugbu a, anyị ahụbeghị ihe niile n'okpuru ya. Ma anyị na -ahụ onye e mere ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi, ya bụ Jesus, kpubeere ya otuto na nsọpụrụ n'ihi ahụhụ nke ọnwụ, ka o wee site n'obiọma Chineke detụ ọnwụ ire maka mmadụ niile. N'ihi na ọ dabara na ọ, onye ihe nile sitere n'aka ya na onye ọ dị n'aka, n'iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime onye nzọpụta ha zuru oke site na nhụjuanya. N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere ịkpọ ya akpọghị ya ụmụnna, sị, “M ga -agwa aha gị ụmụnne m; m ga -abụ abụ otuto n'etiti ọgbakọ. ” Ọzọkwa, "M ga -atụkwasị ya obi." Ọzọkwa, "Lee, Mu na umu Chukwu nyere m. "
Mkpughe 1: 12-18 (Mkpu), m wee nwụọ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis.
M wee tụgharịa hụ olu ahụ na -agwa m okwu, mgbe m tụgharịrị, ahụrụ m ihe ndọba oriọna ọlaedo asaa, n'etiti ihe ndọba oriọna ndị ahụ otu dị ka nwa nke mmadụ, yi uwe mwụda dị ogologo wee kee eriri ọlaedo n'obi ya. Ntutu isi ya dị ọcha, dị ka owu ọcha, dị ka snow. Anya ya dị ka ire ọkụ, ụkwụ ya dị ka ọla na -enwu enwu, nke a nụchara anụcha n'ime ọkụ, olu ya dịkwa ka mkpọtụ nke ọtụtụ mmiri. N'aka nri ya, o jide kpakpando asaa, site n'ọnụ ya ka mma agha dị nkọ nke nwere ihu abụọ siri bịa, ihu ya dịkwa ka anyanwụ na-acha n'ike n'ike. Mgbe m hụrụ ya, m dara n'ala n'ụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o bikwasịrị m aka nri ya, sị, “Atụla egwu. Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ, na nke dị ndụ. M wee nwụọ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe nile, enwekwara m ọtụghe -ụzọ nile nke Ọnwụ na Hades.
Logos (Okwu atụgharịrị) pụtara ihe ekwuru (gụnyere echiche). Ọ na -abụkarị maka ọdịnaya ezi uche dị na ya. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụgharị asụsụ Bekee niile sitere n'asụsụ Grik nke dị tupu ntụgharị KJV, tụgharịrị Logos (Okwu) na Jọn 1: 3, ka ọ bụrụ "ya" kama ịbụ "ya". N'ọnọdụ okwu mmalite nke Jọn, Logos (Okwu) bụ akụkụ nke Chineke kama ịbụ "ya" nke na -egosi onye dị adị. N'ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee ọgbara ọhụrụ John 1: 1-3 ka a na-atụgharịkarị n'ụzọ dị otú a ịkpa ókè onye na-agụ ya ka ọ bụrụ ịkọwa Okwu ahụ dị ka "ya". Agbanyeghị, ekwesịrị ịghọta na Okwu ahụ (Logos) bụ aha na -adịghị ahụ anya nke metụtara akụkụ nke amamihe Chineke gụnyere mgbagha, echiche ya, ebumnuche ya, atụmatụ ya, ma ọ bụ ebumnuche ya maka mmadụ. Ọ bụ site na Logos a (Okwu) ka ihe niile siri dịrị. Okwu ahụ bụrụkwa anụ ahụ mgbe ekwuru na Jizọs dịrị ndụ ebe ọ bụ na Kraịst bụ ebe atụmatụ na nzube Chineke maka mmadụ dị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na Okwu ahụ bụ onye dịrịbu adị tupu a tụrụ ime Jisọs.
Maka nyocha zuru ezu na okwu mmalite nke John, biko lee saịtị UnderstandingLogos.com - https://understandinglogos.com
Isi ihe maka ịghọta Ndị Kọlọsi 1 bụ na nke a bụ amụma (na -ekwu maka ọdịnihu). Naanị n'ihi na ntụgharị asụsụ Bekee doro anya n'oge gara aga, ugbu a, ma ọ bụ n'ọdịniihu, ọ pụtaghị na nke a bụ ihe nke mbụ pụtara. Mmadụ na -ahụtakarị iji '' amụma zuru oke '', ebe amụma nke ihe na -abịabeghị dị na oge zuru oke, yabụ a na -atụgharịkarị ya na Bekee gara aga, dịka… (Aịsaịa 53: 5), mgbe site n'echiche onye amụma, ọ na -ekwu maka ihe n'ọdịnihu.
Ndị Kọlọsi 1:16 kwuru na '' e sitere n'aka ya kee ihe niile '' na '' e kere ihe niile site n'aka ya na maka ya. Agbanyeghị, n'ihe gbara gburugburu anyị na -ahụ na nke a gbasara ihe okike ọhụrụ dịka amaokwu a na -ekwu maka ihe nketa, alaeze na -abịa, na mgbapụta. Ọ na -ekwu na Jizọs bụ onye e buru ụzọ mụọ n'ihe niile e kere eke n'echiche nke bụ na “ọ bụ mmalite, onye ọkpara site na ndị nwụrụ anwụ. Ọ na -ekwukwa maka ebumnobi Chineke: “ka o wee bụrụ ọkaibe n'ihe niile” ka Chineke wee site n'aka ya 'mee ka ya na ihe niile dị n'otu.' Ndị Kọlọsi 1 na -elepụ anya n'ihu ma na -ebu amụma dịka ọ na -ekwu, "ọ nọ tupu ihe niile" (ọ bụghị na ọ dị). N'ikwekọ, Ndị Kọlọsi 1 abụghị ozi gbasara okike mbụ, kama ọ bụ maka ozi ọma nke nzọpụta anyị - ihe nketa n'ime ala -eze Chineke nke na -abịa (ihe okike ọhụrụ). Ọtụtụ amaokwu n'isiakwụkwọ ole na ole mbụ nke Mkpughe na -egosi nghọta na ọkpara n'ihe niile e kere eke = ọkpara site na ndị nwụrụ anwụ. Jizọs bụ onye mbụ na onye ikpeazụ nke ihe okike ọhụrụ nke onye ọ bụla a zọpụtara ga -enwe ndụ wee bụrụ akụkụ nke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ.
Ndị Kọlọsi 1: 12-20 Ọ bụ onye e buru ụzọ mụọ n'ihe nile e kere eke - ọ bụ mmalite, onye e buru ụzọ mụọ site na ndị nwụrụ anwụ
12 na -ekele Nna, onye tozuru oke ịkekọrịta n'ihe nketa nke ndị nsọ n'ìhè. 13 Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie. 15 Ọ bụ onyinyo nke Chineke a na -apụghị ịhụ anya, onye e buru ụzọ mụọ n'ime ihe niile e kere eke. 16 N'ihi na site n'aka ya ka e kere ihe niile, n'eluigwe na n'elu ụwa, ihe a na -ahụ anya na ihe a na -adịghị ahụ anya, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọchịchị ma ọ bụ ikike - e sitere n'aka ya kee ihe niile. 17 Ya onwe -ya bu kwa ihe nile uzọ, ọ bu kwa nime Ya ka ihe nile n togetherguzokọ n'otù. 18 Ọ bụkwa ya bụ isi nke ahụ ahụ, bụ ụka. Ọ bụ mmalite, onye eburu ụzọ si na ndị nwụrụ anwụ pụta, ka o wee bụrụ onye kachasị elu n'ihe niile. 19 N'ihi na nime Ya ka izu -oke nile nke Chineke tọrọ ụtọ ibi nime Ya, 20 na site n'aka ya ka ya na ihe niile dịghachi ná mma, ma n'elu ụwa ma ọ bụ n'eluigwe, na -eme udo site n'ọbara nke obe ya.
Mkpughe 1: 5 (NIV) Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ
na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara onye nwuru anwu, na onye na -achị ndị eze n'ụwa.
Mkpughe 1: 17-18. Abụ m onye mbụ na onye ikpeazụ - M wee nwụọ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe nile, enwekwara m ọtụghe -ụzọ nile nke ọnwụ
Mgbe m hụrụ ya, m dara n'ala n'ụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o bikwasịrị m aka nri ya, sị, “Atụla egwu. Yɛ m’asetram ade titiriw. M nwụrụ, ma lee, m dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, enwekwara m mkpịsị ugodi nke ọnwụ na Hedis.
Mkpughe 2: 8, 10 (NIV) Okwu nke mbụ na onye ikpeazụ, onye nwụrụ wee dị ndụ ọzọ
“Degaara mmụọ ozi nke chọọchị dị na Smụana akwụkwọ: ' okwu nke mbụ na onye ikpeazu, onye nwụrụ wee dị ndụ ọzọ… Kwesịrị ntụkwasị obi ruo ọnwụ, aga m enye gị okpueze nke ndụ
Mkpughe 3: 14, 21 (NIV) Mmalite nke ihe Chineke kere - The otu onye na -emeri, Aga m enye ya ka mụ na ya nọdụ ala n'ocheeze m
“Degakwara mmụọ ozi nke ụka dị na Leọdisia, sị, 'Okwu nke Amen, onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi -okwu, mmalite nke ihe Chineke kere… Ihe otu onye na -emeri, Aga m enye ya ka mụ na ya nọdụ ala n'ocheeze m, dị ka m meriri wee soro Nna m nọdụ ala n'ocheeze ya.
N'okpuru ebe a bụ nsụgharị nkịtị nke Ndị Filipaị 2: 5-11. Ọ dabara n'usoro okwu Grik. Egosikwara bụ ntụgharị asụsụ nkọwa ntakịrị. Nsụgharị ndị a, na -agbanwe agbanwe na ihe Grik pụtara, anaghị atụ aro ka ha bụrụ anụ arụ. Ọ kwesịkwara ịpụta nke ọma na nkwupụta nke ọ bụla n'ime amaokwu ahụ nwere ezi uche na -atụle onodu akụkụ ahụ n'ozuzu ya nke na -akụzi inwe uche nke Kraịst.
Ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee nke ndị Filipaị 2: 6-7 na-egosipụta ajọ mbunobi iji gosi nnabata. Nnyocha miri emi nke ndị Gris na -egosi na nke a abụghị ikpe. Anyị maara na Jizọs bụ ngosipụta nke Chineke ugbu a ka e buliri ya elu ma nye ya aha karịa aha niile. Ọ bụghị ya ka ọ ga -eji malite. Ọ bụ site na nrube isi nke nwoke ahụ Jizọs Kraịst ka enyere ya ike na ikike ugbu a wee mee ya Onyenwe anyị na Kraịst (Ọrụ 2:36).
Maka nyocha zuru ezu biko hụ saịtị FormOfGod.com - https://FormOfGod.com
Ọtụtụ amaokwu dị na Jọn kwuru na Jizọs nọ n'ihu Jọn, si n'eluigwe rịdata, e ziga ya n'ụwa, bilie ebe ọ nọ na mbụ, wee si na Nna bịa wee laghachikwuru Nna. Nkọwa nke “amaokwu ndị siri ike” (site na NKP nkọwa Bible) dị n'okpuru.
"N'ihi na ọ nọ n'ihu m." (Jọn 1:15, 1:30)
Eziokwu dị mfe bụ na Mezaịa ahụ ka John mgbe niile. Mgbe ụfọdụ a na -eji amaokwu ndị a akwado Atọ n'Ime Otu n'ihi na enwere ike ịtụgharị amaokwu a, "n'ihi na ọ bụ [Jizọs] nọ n'ihu m" [Jọn], a na -eche na amaokwu a na -ekwu na Jizọs dị adị tupu Jọn Baptist. N'ezie, ọtụtụ nsụgharị ọgbara ọhụrụ na -atụgharị ahịrịokwu ikpeazụ ihe dị ka, "n'ihi na ọ [Jizọs] dịrị tupu m." Mana, onweghi ihe kpatara iwebata Atọ n'Ime Otu n'ime amaokwu a, enwere ezigbo ihe kpatara na ọ naghị ekwu maka Atọ n'Ime Otu n'ụzọ ọ bụla.
Enwere akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke anyị maara taa bụ amụma nke Mesaya ahụ nke ndị Juu n'oge Kraịst emetụtaghị Mesaya ahụ. Agbanyeghị, anyị makwaara na ndị Juu oge ochie nwere ọtụtụ atụmanya maka Mezaịa ha dabere na Akwụkwọ Nsọ. Mezaịa ahụ ndị Juu na -atụ anya ga -abụ nwa nke Iv (Jen. 3:15), na nwa Abraham (Jen. 22:18), nke si n'ebo Juda (Jen. 49:10); nwa Devid (2 Sam. 7:12, 13; Aịza. 11: 1), na ọ ga -abụ “onyenwe” n'okpuru Yahweh (Ọma 110: 1), na ọ ga -abụ ohu Jehova (Aịsaịa 42 : 1-7), ọ ga-abụ “onye nke ha” ọ ga-enwe ike ịbịaru Jehova nso (Jer 30:21), ọ ga-esi na Betlehem pụta (Maịka 5: 2).
Atụmanya a dabara nke ọma n'ịkụziri ndị na -eso ụzọ ya na Jizọs bụ “Nwa atụrụ Chineke” (Jọn 1:29; ya bụ, Nwa Atụrụ ahụ nke Chineke zitere) yana nkwupụta Jọn na Jizọs bụ “Ọkpara Chineke” (Jọn 1:34). Ọ bụrụ na Jọn gwara ndị na-eso ụzọ ya na Jizọs dị adị tupu ọ dịrị ndụ, ha agaraghị aghọta ihe ọ na-ekwu, nke ga-ebute nnukwu mkparịta ụka na nkọwa nke ozizi nke ịdị adị nke Mesaịa ahụ. Enweghị mkparịta ụka ma ọ bụ nkọwa dị otú ahụ maka eziokwu dị mfe na Jọn anaghị ekwu na Jizọs dị adị n'ihu ya. Jọn adịghị akụzi, ọ gwaghịkwa, Atọ n'Ime Otu n'akụkụ a.
Ọtụtụ nsụgharị nwere ntụgharị okwu nke Jizọs “dịrị tupu” Jọn. Na ntụgharị asụsụ ahụ, okwu Grik a sụgharịrị ịbụ “bụ” bụ ngwaa ēn (ἦν), nke dị na ụda na -ezughị oke, olu na -arụsi ọrụ ike nke eimi, (εἰμί) okwu a na -akpọkarị “ịbụ” (nke pụtara ihe karịrị ugboro 2000 na Agba Ọhụrụ). N'ọnọdụ a, ọ dị mkpa ka anyị ghọta na ike nke ihe na -ezughị okè bụ, “ọ dị adị ma na -adị.” Okwu Grik bụ protos, nke pụtara “nke mbụ” na -abịa. Ọ nwere ike na -ezo aka ịbụ onye “mbụ” n'oge, wee si otú a sụgharịa ya “tupu,” ma ọ bụ ọ nwere ike ịpụta nke mbụ n'ọkwa, wee sụgharịa ya "onye isi," "onye ndu," "onye kacha ukwuu," "kacha mma," wdg. ọtụtụ ihe atụ na -ekwu maka ndị mmadụ ịbụ protos ebe protos na -ezo aka na ọkwa kachasị elu ma ọ bụ ịdị mkpa (kp. Mat. 19:30, 20:27; Mak 6:21; 9:35; 10:31, 44; Luk 19:47; Ọrụ Ndịozi) 17: 4; 25: 2; 28:17; na 1 Kọr. 12:28). N'otu aka ahụ, a na -eji protos eme ihe ndị kacha mma ma ọ bụ kacha mkpa. Dịka ọmụmaatụ, “nke mbụ” na nnukwu iwu bụ nke mbụ dị mkpa, na uwe mwụda “nke mbụ” bụ “uwe kacha mma” (Luk 15:22).
N'iburu n'uche ndị na-eso ụzọ na eziokwu na Jọn anaghị akụziri ha banyere ịdị adị nke Mesaịa ahụ, kama ọ na-anwa ịkọwa na Jizọs bụ Mesaịa ahụ, ọ dị ka Jọn na-ekwu okwu dị mfe nke Jizọs nwere mgbe niile. dị elu karịa ya, na -alaghachi azụ ogologo oge tupu ha amalite ozi ha. Nkwupụta Jọn kwuru na Jizọs “nọ tupu” ya apụtaghị na Jizọs bụ Chukwu ma ọ bụ bụrụ ntụaka maka amụma niile nke Mesaịa na agba ochie na -alaghachi na Jenesis 3:15. Tupu amụọ John ma ọ bụ Jizọs, mgbe Meri bịara ileta Elizabet, Jọn wụpụrụ n'akpa nwa maka ọ joyụ mgbe ọ nọ onye nzọpụta ya nso. Nye Jọn, Jisọs na -akakarị ya.
N'ezie ọ ga -ekwe omume, mana ọ nweghị ụzọ iji gosipụta ya, na mgbe Jọn kwuru na Jizọs nọ n'ihu ya, o bukwara n'uche ya amụma niile nke Mesaịa ahụ n'ime Agba Ochie, na Jizọs nọ n'uche nke Chukwu maka millennia. Ịdị adị nke Kraịst n theuche Chineke pụtara nnọọ ìhè na ọ dịghị mkpa ịgbagha ya. Tupu a tọọ ntọala ụwa, e buru ụzọ mara ya (1 Pita 1:20); site na ntọ -ala nke ụwa ka e gburu ya (Mkpu. 13: 8); na tupu a tọọ ntọala ụwa, anyị, Ụka, bụ ndị a họpụtara n'ime ya (Ndị Efesọs 1: 4). Ihe doro anya banyere Mesaịa ahụ nke e kwuru n'amụma ndị e buru banyere ya na -egosi n'ụzọ doro anya na akụkụ niile nke ndụ ya na ọnwụ ya dị n'uche Chineke nke ọma tupu nke ọ bụla n'ime ha emee. Ọ bụrụ na Jọn bu amụma nke Mesaịa ahụ n'uche mgbe o kwuru okwu a, mgbe ahụ ọ ga -adị ka mgbe Jizọs n'onwe ya kwuru na ọ nọ “n'ihu” Abraham (lee nkọwa na Jọn 8:58).
O doro anya na ihe gbara okwu a gburugburu bụ na isi ihe kpatara okwu Jọn bụ iji bulie Jizọs Kraịst elu ma e jiri ya tụnyere onwe ya, na “onye ka m elu” na -eme nke ahụ. Mesaya ahụ ka ndị amụma ndị ọzọ mma.
“Ma Onye ahụ Nke si n’eluigwe rịdata” (Jọn 3:13, 6:38)
Ihe ekwuru sitere na Chineke ma ọ bụ si n'eluigwe bịa ma ọ bụrụ na ọ bụ Chineke sitere na ya. Dị ka ihe atụ, Jemes 1:17 na -ekwu na ezi onyinye ọ bụla “sitere n’elu” na -esikwa na Chineke “bịa. Ihe James pụtara doro anya. Chineke bụ Onye chepụtara na isi mmalite nke ihe ọma na ndụ anyị. Chineke na -arụ ọrụ n'azụ ihe nkiri iji nye anyị ihe anyị chọrọ. Amaokwu a apụtaghị na ihe ọma dị na ndụ anyị na -esi n'eluigwe agbadata ozugbo. A ga -aghọta ahịrịokwu ahụ “onye si n'eluigwe rịdata” na Jọn 3:13, n'otu ụzọ ahụ anyị si aghọta okwu Jemes - na Chineke bụ isi mmalite nke Jizọs Kraịst, nke Ọ bụ. Kraịst bụ atụmatụ Chineke, mgbe ahụ Chineke mụrụ Jizọs ozugbo.
Enwekwara amaokwu ndị ọzọ na -ekwu na 'Chineke zitere' Jizọs, ahịrịokwu na -egosi Chineke dịka isi mmalite nke ihe ezitere. Jọn Onye Na -eme Baptizim bụ nwoke “sitere na Chineke” (Jọn 1: 6), ọ bụkwa ya kwuru na Jizọs “si n'elu bịa” wee “si n'eluigwe bịa” (Jọn 3:31). Mgbe Chineke chọrọ ịgwa ndị mmadụ na ọ ga -agọzi ha ma ọ bụrụ na ha enye otu ụzọ n'ụzọ iri, Ọ gwara ha na Ọ ga -emepe windo nke "eluigwe" wụsa ngọzi (Mal. 3:10 - KJV). N’ezie, onye ọ bụla ghọtara akpaala okwu a na -eji eme ihe, ọ nweghịkwa onye kwenyere na Chineke ga -awụpụ ihe n’eluigwe n’ụzọ nkịtị. Ha maara na ahịrịokwu ahụ pụtara na Chineke bụ mmalite ngọzi ha nwetara. Ihe atụ ọzọ bụ mgbe Kraịst na -ekwu okwu wee sị, “Baptizim Jọn — ebee ka o si pụta? From si n'eluigwe bịa ka ọ̀ bụ mmadụ? ” (Mat. 21:25). N'ezie, ụzọ baptizim Jọn gaara esi 'n'eluigwe' bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ Chineke kpughere mkpughe ahụ. John enwetaghị echiche ahụ n'onwe ya, o sitere "n'eluigwe". Amaokwu a na -eme ka akpaala okwu ahụ doo anya: ihe nwere ike 'site n'eluigwe,' ya bụ, sitere na Chineke, ma ọ bụ ha nwere ike 'si na mmadụ.' Asusu akpotu bu otu mgbe ejiri Jisos mee ihe. Jizọs sitere “na Chineke,” “site n’eluigwe” ma ọ bụ “site n’elu” n’echiche bụ́ na Chineke bụ Nna ya, sikwa otú a malite ya.
Echiche nke ịbịarute site na Chineke ma ọ bụ ịbụ onye Chineke zitere kọwakwara site n'okwu Jizọs dị na Jọn 17. Ọ sịrị, "Dịka i zitere m n'ime ụwa, ezitekwara m ha n'ụwa" (Jọn 17:18). Anyị ghọtara nke ọma ihe Kraịst bu n'uche mgbe ọ sịrị, "Ọ bụ m zitere ha n'ụwa." Ihe ọ pụtara bụ na ọ họpụtara anyị, ma ọ bụ họpụta anyị. Nkwupụta ahụ apụtaghị na anyị na Kraịst nọ n'eluigwe wee banye n'ime anụ ahụ. Kraịst kwuru, sị, "Dị ka i zitere m, m ka ezitere ha." Yabụ, n'otu aka ahụ Kraịst zitere anyị bụ ka anyị ga -esi ghọta ahịrịokwu ahụ nke Chineke zitere Kraịst.
"ọ bụghị na ọ dị onye hụla Nna m ma e wezụga onye ahụ nke sitere na Chineke, ọ hụwo Nna m." (John 6: 46)
Jọn 6:46 na -egosi mmekọrịta chiri anya nke Jizọs na Chineke nwere. Jizọs nwere ọkwa nke mmekọrịta chiri anya nke ọ na -enwetụbeghị onye ọ bụla na Chineke, tupu ma ọ bụ kemgbe. Jizọs kpughere mmekọrịta chiri anya ya na Chineke na mkparịta ụka ya na ndị mmadụ n'akụkụ Oké Osimiri Galili, igwe mmadụ gụnyere ndị ndu ndị Juu, ndị na -eso ụzọ, na ndị na -ekiri ihe, ka ha gaa n'ihu na -agwa ha, n'agbanyeghị na ọ na -agbachi nkịtị, na ọ bụ Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa. . Jizọs gosiri na ya bụ Mesaya n'ọtụtụ ụzọ. O kwuru na Chineke tinyere ya akara ya, nke pụtara na Jizọs nwere akara nke eziokwu na nnabata (Jọn 6:27). O kwuru na ịrụ ọrụ Chineke pụtara ikwere na ya (Jọn 6:29). O kwuru na ya bụ achịcha nke ndụ na agụụ agaghị agụ ndị na -eri ya (Jọn 6:35; cp Jọn 6:48, 51). Ọzọkwa, ọ sịrị na ndị kwere na “Ọkpara ahụ” ga -enwe ndụ n'ọgbọ na -abịa n'ihi na ọ ga -akpọlite ​​ha n'ọnwụ (Jọn 6:40, 44, 47, 54). Ụzọ nkuzi a na -apụtachaghị anya bụ ụzọ Jizọs si ekwu okwu - na -egosi n'ụzọ doro anya eziokwu na ọ bụ Mezaịa ka ndị nwere obi Chukwu wee nwee ike ịnụ ma kwere, mana ọ gwaghị eziokwu ahụ nke ọma nke na ọ manyere ndị na -emegide ya. ngosipụta na-apụ apụ. Ndị na-emegide ya enweghị ike ịghọta ihe ọ na-ekwu wee kwụsị ịrụ ụka banyere ya (Jọn 6: 41-44).
Ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọta site na Jọn 6:46 na Jizọs ga-abụrịrị Chineke, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na ọ dịrị tupu ọmụmụ ya n'ihi na o kwuru na ya ahụla “Nna ahụ.” Agbanyeghị, amaokwu a enweghị ihe jikọrọ ya na Atọ n'Ime Otu ma ọ bụ ịdị adị. Isi ihe ga -enyere anyị aka ịghọta Jọn 6:46 bụ ịmara na nkebi ahịrịokwu ahụ 'hụrụ Nna' anaghị ezo aka na mmadụ iji anya nkịtị hụ kama ọ bụ n'ụzọ ihe atụ 'ịmara Nna ahụ.' Jizọs maara Chineke, ọ bụghị n'ihi na ọ dịrị ndụ ma soro Chineke na -akparịta ụka n'eluigwe tupu amụọ ya n'ụwa, kama n'ihi na Chineke kpughere Jizọs onwe ya nke ọma karịa ka ọ maara onye ọ bụla ọzọ. Jizọs mere ka nke a doo anya na nkuzi ndị ọzọ mgbe ọ sịrị, "N'ihi na Nna m hụrụ Ọkpara ya n'anya, na -egosikwa ya ihe niile ọ na -eme…” (Jọn 5:20).
N’asụsụ Hibru na Grik, okwu ndị a sụgharịrị ‘hụ’ n’ime Baịbụl na -apụtakarị “ịma ma ọ bụ ịghọta.” A na -eji okwu Hibru echicheh anya ịhụ ihe na ịmata ihe, ma ọ bụ ịghọta ya (Jen. 16: 4; Ọpụ. 32: 1; Ọnụ Ọgụ. 20:29). N'otu aka ahụ, okwu Grik bụ horaō (ὁράω), nke a sụgharịrị ịbụ 'hụ' na Jọn 1:18, 6:46; na 3 Jọn 1:11, nwere ike ịpụta “iji anya hụ ihe” ma ọ bụ “iji uche hụ, ịghọta, ịmata.” Ọbụnadị n'asụsụ Bekee, otu n'ime nkọwa maka “hụ” bụ “ịmara ma ọ bụ ịghọta”. Dịka ọmụmaatụ, mgbe mmadụ abụọ na -akparịta ụka, otu nwere ike ịsị onye nke ọzọ, “Ahụrụ m ihe ị na -ekwu.”
Ojiji nke 'ịhụ' dịka o siri metụta 'ịmara' dị n'ọtụtụ ebe n'ime Agba Ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, Jizọs sịrị Filip, “… Onye ọ bụla hụla m ahụla Nna m…” (Jọn 14: 9). N'ebe a kwa, ejiri okwu ahụ bụ "ịhụ" gosi "ịmara." Onye ọ bụla maara Jizọs (ọ bụghị naanị ndị “hụrụ” ya) ga -ama Nna ahụ. N'ezie, Jizọs mere ka amaokwu abụọ a doo anya na mbụ mgbe ọ sịrị Filip, "Ọ bụrụ na ị maara m n'ezie, ị ga -amakwa Nna m. Site ugbu a gaa n'ihu, ị maara ya wee hụ ya. ”(John 14: 7) N'amaokwu a, Jizọs kwuru na ndị maara ya 'ahụla' Nna ahụ.
Amaokwu ọzọ na -eji okwu a 'hụrụ' n'echiche nke 'amaara' bụ Jọn 1:18: “Ọ dịghị onye hụtụrụla Chineke; Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, onye nọ n'obi Nna, o mewo ka ọ mara ya. ” Nkebi ahịrịokwu ahụ “hụrụ Chineke” na nkebi ahịrịokwu ahụ “emewo ka a mara ya,” na ahịrịokwu abụọ ahụ na -ezo aka n'ọrụ Jizọs, Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, rụzuru. Ọ dịghị onye maara Chineke nke ọma, ma Jizọs mere ka a mara ya. N’ime agba ochie nile, ihe ndị mmadụ matara gbasara Chineke pere mpe. N’eziokwu, 2 Ndị Kọrịnt 3: 13-16 na-ekwu maka na ọbụna taa, ndị Juu jụrụ Kraịst nwere ihe mkpuchi kpuchie obi ha. Ọmụma zuru oke, “eziokwu” gbasara Chineke, sitere na Jizọs Kraịst (Jọn 1:17). Ọ bụ ya bụ onye “hụrụ” (ghọta nke ọma) Chineke, wee kuziere ndị ọzọ - nke bụ ihe Jọn 1:18 na -ekwu. Tupu Jizọs Kraịst abịa, ọ dịghị onye maara Chineke n'ezie dị ka Ọ bụ, Nna nke eluigwe na -ahụ n'anya, mana Jizọs Kraịst “hụrụ” (mara) Chineke nke ọma n'ihi na Nna kpughere onwe ya nye ya n'ụzọ ndị ọ na -amabeghị.
“Dị ka Nna dị ndụ zitere m.” (John 6: 57)
Ozizi nke Chineke zitere Jizọs Kraịst pụtara ihe karịrị ugboro iri anọ n'ime agba ọhụrụ, ọ nwekwara ike nwee nkọwa dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche. Na Chineke zitere Jizọs n'ụwa nwere ike inwe di nuances dị iche iche. Otu ihe bụ na Jizọs bụ “Adam ikpeazụ” (1 Kọr. 15:45), dịkwa ka Chineke siri kee Adam, otu a ka Chineke si kee Jizọs site na ịmụ ya na Meri. Yabụ, izipụ Jizọs nwere ike na -ezo aka ịtụrụ ime ya na ọmụmụ ya, yana ozi na -esochi ịzọpụta mmadụ, ma ọ bụ ọ nwere ike na -ezo aka na ihe ga -eme n'ọdịnihu mgbe Chineke zitere Jizọs ka ọ mezuo ozi ya ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, nke ikpeazụ pụtara, bụ ihe Jọn 17:18 (NET) pụtara mgbe Jizọs kpegaara Chineke ekpere sị: “Dịka i zitere m n'ụwa, otu a ka m si ziga ha n'ime ụwa.” Jizọs nyere ndịozi ya ọrụ wee zipụ ha dị ka Chineke nyere ya ikike wee zipụ ya.
Enwere ụfọdụ ndị na -ekwusi ike na n'ihi na Chineke “zitere” Jizọs, na Jizọs ga -abụrịrị Chineke. Mana nke ahụ na -agụbiga oke ókè n'echiche dị mfe nke ịbụ "ezitere". Echiche bụ na Chineke 'zitere' ihe bụ ihe a na -ejikarị eme ihe, nke pụtara na ọ bụ Chineke bụ isi mmalite, ma ọ bụ "onye na -ezipụ," ihe e zitere. Ọ dịghị ihe mere a ga -eji kwenye na ọ bụ Chineke zitere Jizọs na -eme ka ọ bụrụ Chineke — ọ nweghị ihe ọzọ “zitere” Chineke bụ Chineke. Nkebi ahịrịokwu ahụ pụtara ihe ọ na -ekwu, na ọ bụ Chineke zitere Jizọs. Akwụkwọ Nsọ nwere ọtụtụ ihe atụ nke ihe Chineke zitere, ihe niile pụtara na ọ bụ Chineke sitere na ya. Chineke zitere ihu igwe na -adịghị mma n'Ijipt (Ọpụ. 9:23), agwọ dị ọkụ n'ahụ ụmụ Izrel (Ọnụ Ọgụ. 21: 6), Moses (Deut. 34:11), ndị amụma (Ndị Ikpe 6: 8), na ọtụtụ ndị ọzọ na ihe . Jọn Baptist bụ nwoke “Chineke zitere” (Jọn 1: 6). Okwu Jọn Onye Na -eme Baptizim banyere iziga ya doro anya nke ukwuu, ọ bụrụkwa na ewere ya n'otu ụzọ ahụ ụfọdụ ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -ewere Jizọs ka 'Chineke zitere', ha ga -emekwa John Chukwu. Jọn sịrị, “Abụghị m Kraịst, kama e zitere m n'ihu Ya” (Jọn 3:28). Anyị niile maara na ihe Jọn bu n'uche na “e zitere m ka m buru ya ụzọ” pụtara na Chineke nyere Jọn ọrụ n'oge Mesaịa gara aga. Mana ọ bụrụ na mmadụ ekwenyelarị na John ka ọ bụrụ onye nke anọ nke Chukwu, yabụ ihe John kwuru nwere ike bụrụ ihe akaebe na -akwado nkwenye ahụ. Isi ihe bụ na naanị ihe kpatara mmadụ ga-eji kwuo na 'Chineke zitere' Jizọs pụtara na ọ bụ Chineke ma ọ bụ na ọ dịrịla adị n'eluigwe ga-abụ ma ọ bụrụ na o nwere nkwenye ahụ. Okwu ndị ahụ n'onwe ha anaghị ekwu ma ọ bụ pụtara nke ahụ.
Jizọs mere ka o doo anya na onye 'na -ezipụ' karịrị onye 'e zitere'. Na Jọn 13:16, ọ sịrị, “Ohu adịghị aka onyenwe ya, onye ezitere adịghịkwa aka onye zitere ya.” Ya mere, ọ bụrụ na Nna zitere Jizọs, mgbe ahụ Nna ahụ ka Jizọs ukwuu. Mgbe ahụ o mere ka nke ahụ doo anya nke ọma mgbe o kwuru n'isiakwụkwọ na -esote, "Nna m ka m ukwuu" (Jọn 14:28).
"Na -agbago ebe ọ nọ na mbụ." (Jọn 6:62)
Amaokwu a na -ekwu maka mbilite n'ọnwụ Kraịst. Eziokwu a doro anya site n'ịmụ ihe gbara ya gburugburu. N'ihi na ndị ntụgharị okwu ahọrọla ịsụgharị anabainō (ἀναβαίνω) ka ọ "rịgoro," ndị mmadụ kwenyere na ọ na -ezo aka nrịgo Kraịst site n'ụwa dịka e dekọrọ ya na Ọrụ 1: 9, mana Ọrụ 1: 9 ejighị okwu a. Anabainō pụtara naanị "ịrịgo." Eji ya maka 'ịrịgo' na elu dị elu dị ka ịrị ugwu (Mat. 5: 1, 14:23, et al.), Nke Jizọs 'si n'okpuru mmiri pụta' n'oge baptism ya (Mat. 3 16: 1; Mak 10:13), nke osisi 'na -etolite' site na ala (Mat. 7: 4; Mak 7: 8, 32, 19), ma ọ bụ ọbụna 'ịrịgo', ya bụ, 'ịrịgo' , ”Osisi (Luk 4: XNUMX). Kraịst nọ na -ajụ ma ha ga -ewe iwe ma ọ bụrụ na ha ahụ ya ka o si na ala pụta, ya bụ, kpọlite ​​ya n'ọnwụ, nọrọ ebe ọ nọ na mbụ, ya bụ, dị ndụ na n'ụwa.
Ihe gbara amaokwu a na -egosi na Jizọs na -ekwu maka ịbụ achịcha sitere n'eluigwe na inye ndụ site na mbilite n'ọnwụ ya. Amaokwu dịka Jọn 6: 39-40 na 6:44 na-akwado nke a: Jizọs kwuru ugboro ugboro, “… M ga-akpọlite ​​ya [onye kwere ekwe ọ bụla] n'ụbọchị ikpeazụ.” O juru Kraịst anya na ụfọdụ n'ime ndị na -eso ụzọ ya were iwe n'ozizi ya. Ọ nọ na -ekwu maka mbilite n'ọnwụ, ma ha were iwe, yabụ ọ jụrụ ha ma ọ bụrụ na ha ahụ ya ka a kpọlitere ya n'ọnwụ, nke a tụgharịrị ka ọ "gbagoo" na Jọn 6:62. [Norton, op. cit., Nkwupụta nke Ihe Mere na-ekwenyeghị na Ozizi Atọ n'Ime Otu, p. 248-252; Snedeker, op. cit., Nna anyị nke Eluigwe enweghị ndị ha nhata, p. [Foto dị na peeji nke 215.]
“Nke a abụghị ihe Abraham mere” (Jọn 8:40)
Ụfọdụ na -ekwusi ike na Jọn 8:40 na -egosi na Jizọs dịburu ndụ n'ihi na ha weere na Jizọs kwuru na Abraham egbughị ya. Agbanyeghị, amaokwu a bụ na Jizọs kpọrọ onwe ya “nwoke gwara unu eziokwu nke m nụrụ n'ọnụ Chineke.” na mbụ n'amaokwu nke 39, ọ sịrị, "Ọ bụrụ na unu bụ ụmụ Abraham, unu ga -arụ ọrụ Abraham mere." O doro anya site na amaokwu a na Jizọs na -ekwu na omume ha adabaghị na nke Abraham na Abraham anwaghị igbu ndị na -ekwu eziokwu ka ha nụrụ n'ọnụ Chineke. Nke ahụ bụ na Abraham anwaghị igbu ndị amụma dịka ha na -agba izu ime. N'ebe ọzọ, na Luk na Matiu Jizọs kwuru ọtụtụ ugboro maka igbu ndị amụma site n'aka ndị isi okpukpe ihu abụọ (Luk 6: 22-23, Luk 11: 47-54, Luk 13: 33-34).
“Tupu Abraham adị, a bụ m” (Jọn 8:58)
Ụfọdụ na -ekwu na ebe ọ bụ na Jizọs nọ “tupu” Ebreham, ọ ga -abụrịrị na Jizọs bụ Chineke. Mana Jizọs adịghị ndụ tupu ịtụrụ ime ya na Meri, mana ọ “dị adị” na atụmatụ Chineke, ma buru amụma ya n'amụma. Amụma nke onye mgbapụta na -abịa na -amalite na Jenesis 3:15, nke dị tupu Abraham. Jizọs bụ “otu,” Onye nzọpụta, ogologo oge tupu Abraham. Chọọchị ekwesịghị ịdị ka mmadụ nkịtị ka Chineke họrọ anyị tupu a tọọ ntọala ụwa (Ndị Efesọs 1: 4), anyị nọ n'uche Chineke. N'otu aka ahụ, Jizọs abụghị onye dị adị n'oge anụ ahụ n'oge Abraham, mana ọ “dị adị” n'uche Chineke dịka atụmatụ Chineke maka mgbapụta mmadụ.
Ọ dịkwa mkpa ịmara na ọtụtụ mmadụ na -agụhie Jọn 8:58 wee chee na ọ na -ekwu na Jizọs hụrụ Abraham. Anyị ga -agụrịrị Baịbụl nke ọma maka na o kwughị ụdị ihe ahụ. Ọ naghị asị na Jizọs hụrụ Abraham, ọ na -ekwu na Abraham hụrụ ụbọchị Kraịst. Iji nlezianya gụọ ihe gbara amaokwu a gburugburu na -egosi na Jizọs na -ekwu maka 'ịdị adị' n'ọmụma Chineke. John 8:56 na -asị, "Nna gị Abraham nwere aicedụrị ịhụ ụbọchị m, ọ hụkwara ya wee gladụrịa ọ ”ụ." Amaokwu a na -ekwu na Abraham “hụrụ” ụbọchị Kraịst (ndị ọkà mmụta okpukpe na -ewerekarị ụbọchị Kraịst ka ọ bụrụ ụbọchị Kraịst ga -emeri ụwa wee guzobe alaeze ya - ọ ka dịkwa n'ihu). Nke ahụ ga -adabara n'ihe akwụkwọ ndị Hibru kwuru maka Abraham: "N'ihi na ọ nọ na -ele anya obodo ahụ nke nwere ntọala, nke Chineke bụ onye wuru ya na onye rụrụ ya" (Hib 11:10). Bible na -ekwu na Abraham “hụrụ” obodo nke ka dị n'ihu. N'echiche dị a couldaa ka Abraham pụrụ ịhụwo ihe ga -eme n'ọdịnihu? Abraham “hụrụ” ụbọchị Kraịst n'ihi na Chineke gwara ya na ọ na -abịa, Abraham 'hụkwara' ya site n'okwukwe. Ọ bụ ezie na Abraham jiri okwukwe hụ ụbọchị Kraịst, ụbọchị ahụ dị n'uche Chineke ogologo oge tupu Abraham. Ya mere, n'ihe gbasara atụmatụ Chineke dị site na mmalite, n'ezie, Kraịst nọ "n'ihu" Abraham. Kraịst bụ atụmatụ Chineke maka mgbapụta mmadụ ogologo oge tupu Abraham adị ndụ.
“Si… na -alakwuru Nna m” (John 16: 28)
Nke a dị mfe nghọta ma ọ bụrụ na anyị ewere Akwụkwọ Nsọ na ọnụ ahịa ya, na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Amụrụ Nanị nke Nna. Jizọs "sitere" n'aka Nna mgbe ọ tụrụ ime Meri, dịka anyị niile si n'aka ndị nna anyị mgbe nne mụrụ ha ime. Jizọs maara site n'Akwụkwọ Nsọ na ọ ga -agakwuru Nna ahụ n'oge mbilite n'ọnwụ ya, yabụ na ọ na -ekwu nke ahụ nye ndị ozi ebe a na Nri Anyasị Ikpeazụ, obere oge tupu ejide ya na ịkpọgide ya n'obe. Amaokwu a anaghị ekwu maka ozizi nke “anụ arụ.”
Ọtụtụ amaokwu dị na agba ọgbụgba ndụ emerụla iji kwado nkwenkwe ọdịnala nke Jizọs dịrị adị na ịbụ anụ arụ nke Chineke.
Jud 1: 5 - “Onyenwe anyị napụtara ndị ya n'Ijipt” ka a gbanwere ka “Jizọs anapụta” n'ime ihe odide ole na ole iji mee ka Jizọs dịrị na agba ochie. Ederede Critical na KJV gụrụ, "Ugbu a, achọrọ m ichetara gị, n'agbanyeghị na ị maara ihe niile otu oge na ihe niile, na Onyenwe anyị, mgbe ọ zọpụtara ndị mmadụ n'ala Ijipt, mechara bibie ndị na -ekweghị." Ọdịiche na -anọchite anya nrụrụ aka nke orthodoox nke ejiri na ntụgharị asụsụ ụfọdụ bụ na ejiri “Onyenwe anyị” dochie “Jizọs”. Ụfọdụ nsụgharị ọgbara ọhụrụ gụnyere nrụrụ aka a gụnyere ESV.
Matthew 1: 18 - Matiu dekọtara “mmalite” Jizọs Kraịst. Ndị na -akwado ozizi Atọ n'Ime Otu na -enweghị ahụ iru ala "Jenesis”(Mbido, mbido, ọmụmụ) gbanwere ya ka ọ bụrụ“genesis”(“ Ọmụmụ ”).
Luke 9: 34 - Ndị odeakwụkwọ gbanwere ahịrịokwu ahụ “onye ahọpụtara” gaa na “onye ihe ya masịrị m.” Nke a bụ mgbanwe dị aghụghọ, mana ọ na -ewepụ mkpa ọ dị n'eziokwu ahụ bụ na Jizọs bụ a họọrọ site na Chineke, nke ụfọdụ mmadụ matara na ọ baghị uru ma ọ bụrụ na Jizọs bụ Chukwu
1 Kọrịnt 15: 45 - Ndị odeakwụkwọ gbanwere “nwoke mbụ, Adam” ka ọ gụọ, “onye mbụ, Adam” iji kpochapụ okwu ahụ bụ “mmadụ,” ebe ọ bụ na site na ntụnyere ụtọ asụsụ, Kraịst ga -abụrịrị nwoke.
Ndị Efesọs 3: 9 - “Chineke onye kere ihe niile” ka a gbanwere ka ọ bụrụ “Chineke onye sitere n’aka Jizọs Kraịst kee ihe niile.”
1 Timothy 3: 16 - “Onye” a gbanwere ka ọ bụrụ “Chukwu.” Mgbanwe a pụtara nnọọ ìhè n'ihe odide, ndị ọkà mmụta Atọ n'Ime Otu kwetara n'ihu ọha. Mgbanwe ahụ rụpụtara arụmụka Atọ n'Ime Otu dị ike nke ukwuu, n'ihi na ederede a gbanwere na -agụ, "E mere ka Chineke pụta n'anụ ahụ," kama ịbụ "[Jizọs] onye pụtara ìhè n'anụ ahụ," nke bụ ọgụgụ ziri ezi ma ama ama.
Ndepụta buru ibu nke nrụrụ aka ederede na -akwado ọnọdụ Atọ n'Ime Otu - Njikọ weebụsaịtị:
Mgbanwe Ọtọdọks nke Akwụkwọ Nsọ, Bart Ehrman, Njikọ akwụkwọ Amazon: https://amzn.to/3chqeta
Jenesis 1:27 na Jenesis 5: 1-2 na-ekwu maka Chineke naanị. Agbanyeghị, mgbe Chineke na -ekwu okwu na Jenesis 1:26, a na -eji ọtụtụ eme ihe. Ndị kweere na Kraịst adịworị adị kwere na Chineke na-agwa Jizọs okwu nke bịara n'anụmanụ. Rịba ama ama Jen 1:27 na-agụ “nke ya” na “ọ” ugboro abụọ (ọ bụghị nke ha na ha) yana otu ahụ ka Jen 5: 1-2 si agụ. Agbanyeghị na Ọ na -agwa ọtụtụ okwu okwu, ọ bụ naanị ya bụ Onye Okike (“o kere ha”).
Jenesis 1: 26-27,
Mgbe ahụ Chineke sịrị, “Hapụ us mee mmadu anyị foto, mgbe anyị oyiyi. Ka ha nweekwa ike ịchịkwa azụ̀ nke oke osimiri na anụ ufe nke eluigwe na anụ ụlọ na anụ ụlọ na ihe niile na -akpụ akpụ nke na -akpụ akpụ n'elu ụwa. ” Ya mere, Chineke kere mmadụ n'ime ya onyinyo nke onwe, n'oyiyi nke Chineke he kere ya; nwoke na nwanyi he kere ha.
Jenesis 5: 1-2,
“Nke a bụ akwụkwọ nke ọgbọ Adam. Mgbe Chineke kere mmadụ, he mee ya n'oyiyi Chineke. Nwoke na nwanyị he kere ha, na he gọziri ha wee kpọọ ha Mmadụ mgbe e kere ha. ”
Nkọwa maka "Ka anyị mee mmadụ n'onyinyo anyị"
Chineke na -agwa usuu ndị agha nọ n'eluigwe okwu (ụmụ Chineke) ndị dị adị wee hụ ihe okike. Chineke na-ekerịta ebumnuche ya na ndị ohu ya (Job 38: 1-7, Amos 3: 7, Jen 18:17). Chineke na -ajụ ndị nnọchi anya tupu ọrụ okike (Isa 6: 8, Job 15: 8, Jer 23:18)
Plural of ịdị ukwuu - Chineke dị oke ukwuu n'ime onwe ya nke na ọ nwere ike ịkọwa onwe ya na ọtụtụ ọ bụ ezie na ọ bụ otu. (Ọma 150: 1-2, Deut 33: 26-27) Lee Royal we: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_we
Chineke na -agwa eluigwe ya dị ike okwu - eluigwe dị n'okpuru ya ma rube isi n'iwu ya. Ọ bu okwu Jehova ka eji me elu -igwe, were kwa iku -ume nke ọnu -Ya me usu -ha nile. (Deut 32:43, Deut 33:26, Ps 19: 1, Ps 33: 6, Ps 50: 4, Ps 66:33, Ps 136: 4-8, Ps 150: 1, Job 26:13)
Chineke na -agwa onwe ya okwu (uche ya). Chineke ji amamihe ya mee ụwa. Amamihe dị n'aka Chineke na mbido wee guzobe ya tupu okike (Ọma 33: 6, Ilu 3: 19-20, Ilu 8: 22-31, Jer 10:12, Jer 51:15, Jọn 1: 1-3)
Chineke na-agwa aka ya okwu-Chineke na-arụ ọrụ site n'ọlụ aka ya (Ọpụ 15: 4-7, Deut 33:11, Ọma 28: 5, Ọma 92: 4, Ọma 138: 7)
Anyị maara na Chineke bu n'obi na a ga -egbu Nwa atụrụ ahụ dịka atụmatụ ya maka Oziọma si dị tupu ụwa adị. Otú ọ dị, e gburu Nwa Atụrụ ahụ n'ezie site na ntọala nke ụwa. Atụmatụ a dị site na mmalite, emezughị ya ruo oge zuru oke.
Mkpughe 13: 8, Nwa atụrụ e gburu site na ntọala nke ụwa
Na ndị niile bi n'elu ụwa ga -akpọ isiala nye ya, ndị edeghị aha ha n'akwụkwọ nke ndụ of Nwa atụrụ ahụ gburu site na ntọala nke ụwa.
Logos bụ akụkụ nke Chukwu gbasara uche na ebumnuche Chineke (amamihe). Mmụọ Nsọ bụkwa akụkụ nke Chineke gbasara mmetụta ịchịkwa ya (ike). Site na ebum n'obi Chineke (akara) na site na nchịkwa nchịkwa nke Chineke (Mmụọ Nsọ), ihe niile na -adị. Nke a bụ ka e si kee ihe mbụ (Adam mbụ) na otu a ka Jizọs Kraịst (Adam ikpeazụ) si malite. Emere anyị ka anyị bụrụ ihe e kere ọhụrụ, na -anatakwa nkuchi nke ụmụ nwoke na ihe nketa n'ime alaeze Chineke site n'aka Jizọs Kraịst dịka amamihe ebighi ebi nke Chineke si dị.
Okwu a na -eme anụ ahụ = Chineke na -ekwu na Jizọs dị adị dịka amamihe ya si dị (logos)
na Okwu ahụ ghọrọ anụ ahụ́ o we biri n'etiti ayi, ayi ahuwo kwa otuto -Ya, otuto dika nke Ọkpara amuru nání Ya site na Nna, juputara n'amara na ezi -okwu.
Mmụọ Nsọ tụụrụ ime Jisọs (ume nke Chukwu)
Luk 1:35 (NLT)
Mọ -ozi ahu we za ya, si,Mmụọ Nsọ ga -abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga -ekpuchikwa gị; ya mere nwa a ga -amụ a ga -akpọ ya onye nsọ — Ọkpara Chineke.
Ọ bụ ihe megidere Akwụkwọ Nsọ
Ọ na -agbagọ ozi nke Oziọma ahụ na ezi ihe amaokwu dị iche iche pụtara
Ọ na -emebi mmadụ nke Kraịst - Ka ọ bụrụ ezi mmadụ, ọ ga -abụrịrị na e mere ya ka ọ dịrị ka mmadụ - na -ebughị ụzọ dịrị ka Chineke ma ọ bụ mmụọ ozi nke Chineke. Ikwere n'ezi mmadu nke Kraist bu ihe di mkpa n'ozi ozioma. 1 Jọn 4: 2 na -ekwupụta na anyị ga -ekwere na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ (bụ mmadụ).
1 Jọn 4: 2, Na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ si na Chineke
Site na nke a ị maara mmụọ nke Chukwu: mmụọ ọ bụla nke na -ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ si na Chineke,
Ọrụ 3:13 (ESV), Tọ bu Chineke nke nna -ayi -hà, mere otuto ohu ya Jizọs
Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekob, Chineke nke nna -ayi -hà, dị ebube ohu ya JizọsOnye unu nyefere n'aka Paịlet, mgbe o kpebiri ịtọhapụ ya
Ọrụ 17: 30-31 (NIV) Ọ ga -ekpe ụwa ikpe n’ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara
Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a, ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa ebe ọ bụla, n'ihi na o debere otu ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n’ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
Ndị Rom 5:19 (NIV) Site na nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume
N'ihi na dị ka nnupụisi nke otu onye ahụ mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie site na nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume.
1 Ndị Kọrịnt 15:21 Ọnwụ sitere n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye
Maka dị ka ọnwụ sitere n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye.
(Ndị Filipaị 2: 8-9) Ịhụta n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'ịghọ na -erube isi ruo ọnwụ
na ịbụ onye a hụrụ n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'ịghọ na -erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe. Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nyekwa ya aha dị elu karịa aha niile,
(Gụọ 1 Timoti 2: 5-6.) otu Chineke, na e nwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
N'ihi na enwere otu Chineke, na e nwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ akaebe a na -enye n'oge ya.
Ndị Hibru 4: 15 (NIV) Anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na -enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị
anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na -enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bu onye anwaworo n'ihe nile dị ka anyị dị, ma anyị enweghị mmehie.
(Ndị Hibru 5: 1-5) Kraịst ebulighị onwe ya elu ka ọ bụrụ nnukwu onye nchụàjà, mana a họpụtara
n'ihi na a na -ahọpụta onye isi nchụàjà ọ bụla n'etiti mmadụ ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. O nwere ike jiri nwayọ mesoo ndị na -amaghị ihe na ndị na -enupụ isi, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enwe adịghị ike. N'ihi nke a, iwu ji ya ịchụ àjà maka mmehie nke ya dịka ọ na -achụ maka ndị mmadụ. Ọ dịghịkwa onye na -ewere nsọpụrụ a nye onwe ya, kama ọ bụ naanị mgbe Chineke kpọrọ ya, dịka akpọrọ Erọn. Otu a kwa Kraịst ebulighị onwe ya elu ka ọ bụrụ nnukwu onye nchụàjà, mana a họpụtara site n'aka onye sịrị ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla gị”
(Ndị Hibru 5: 8-10) Ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara
N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrube isi site na ahụhụ ọ tara. N'ịbụ onye e mere ka ọ zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, onye Chineke họpụtara ịbụ nnukwu onye nchụàjà dika usoro Melkizedek si dị.
Ọdịdị nke ịdị adị n'ime agba ọhụrụ
pdf nbudata: https://focusonthekingdom.org/The%20Nature%20of%20Preexistence.pdf
Ọdịdị nke Jisos-Ọdịdị nkịtị ma ọ bụ echiche
pdf nbudata: Ndụ Jizọs dịrị tupu ọ dịrị ndụ — Ọ̀ Bụ ralkèala Ka Ọ̀ Bụ Eziokwu?
Na-ewepụta Ndị Filipaị 2: 6-11 n'ime oghere
pdf nbudata: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf
Echiche Virginal ma ọ bụ mmalite? Ileba anya n'ihe ọmụmụ nke Kraist nke Matiu 1: 18-20
pdf nbudata: http://focusonthekingdom.org/Virginal.pdf